“ပရိသတ်တွေအံ့သြအောင် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်ချပြလာတဲ့ ကျော်ကျော်” - Cele Connections
“ပရိသတ်တွေအံ့သြအောင် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်ချပြလာတဲ့ ကျော်ကျော်”
မျက်နှာပြောင်လွန်းပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ကျော်ကျော်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်၊ ဆုမြတ်နိုးဦးတို့နဲ့အတူ ဗရမ်းဗတာ ဘီအက်ဖ်အက်ဖ်များ ပေ့ခ်ျထောင်ထားပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆေးထိုးပိုစ့်လေးတွေနဲ့ အပြန်အလှန်စနောက်ကာ ပျော်ပျော်နေတတ်တာတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အများဆုံး ဆေးထိုးစနောက်တတ်တဲ့ သူက ကျော်ကျော်ဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ အမြဲတမ်း မျက်နှာပြောင် စနောက်ကာ ဆေးအထိုးဆုံး လူသားလို့တောင် ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်..။ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့မှာလည်း ကျော်ကျော်က ပရိသတ်တွေကို ဆေးထိုးတဲ့ ပိုစ့်လေးကို တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ ပိုစ့်လေးကတော့ “Happy Anniversary ပါချစ်သူ ..။ သူမနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်အတွင်းမှာ သူမပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အမှတ်တရတွေကြီးပါပဲ..။ အချစ်တွေနဲ့ အမြဲတမ်းသိမ်းထားပါ့မယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်နော်..” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
ပုံလေးတွေကတော့ ဗလာဖြစ်နေပြီး လိုင်းကျလို့ မမြင်ရတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ကျော်ကျော်က ပရိသတ်တွေကို ဆေးအကြီး ကြီးထိုးပြီး စနောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ပရိသတ်တွေကို အထင်နဲ့ အမြင်လေးလွဲအောင် လုပ်ကာ အပျော်ကြီး ပျော်နေမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲနော် ပရိသတ်ကြီးရေ..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးထဲကရော ဘယ်သူတွေများ ကျော်ကျော်ရဲ့ ဆေးထိုးပိုစ့်လေးကို မိခဲ့ကြသေးလဲ…??? ဆေးထိုးပိုစ့်လေးကို မိခဲ့တဲ့ သူတွေရှိရင်လည်း အပျော်သဘောလေးနဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်..။
Source: Kyaw Naing Oo’s Facebook
“ပရိသတျတှအေံ့သွအောငျ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး တရားဝငျခပြွလာတဲ့ ကြျောကြျော”
မကျြနှာပွောငျလှနျးပွီး ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျတတျတဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော ကြျောကြျောကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ သူငယျခငျြးတှဖွေဈကွတဲ့ ညီထှဋျခေါငျ၊ ဆုမွတျနိုးဦးတို့နဲ့အတူ ဗရမျးဗတာ ဘီအကျဖျအကျဖျမြား ပခြေျ့ထောငျထားပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဆေးထိုးပိုဈ့လေးတှနေဲ့ အပွနျအလှနျစနောကျကာ ပြျောပြျောနတေတျတာတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတှေ ပဲဖွဈပါတယျ..။
သူငယျခငျြးတှထေဲမှာ အမြားဆုံး ဆေးထိုးစနောကျတတျတဲ့ သူက ကြျောကြျောဆိုတာကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး သိပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ အမွဲတမျး မကျြနှာပွောငျ စနောကျကာ ဆေးအထိုးဆုံး လူသားလို့တောငျ ပွောရမယျ ထငျပါတယျ..။ ဒီနေ့ ဧပွီလ (၉)ရကျနမှေ့ာလညျး ကြျောကြျောက ပရိသတျတှကေို ဆေးထိုးတဲ့ ပိုဈ့လေးကို တငျလာခဲ့ပါတယျ..။ ပိုဈ့လေးကတော့ “Happy Anniversary ပါခဈြသူ ..။ သူမနဲ့ခဈြသူဖွဈခဲ့တဲ့ သုံးနှဈအတှငျးမှာ သူမပေးခဲ့တဲ့ လကျဆောငျလေးတှကေတော့ ကြှနျတေျာ့အတှကျ အမှတျတရတှကွေီးပါပဲ..။ အခဈြတှနေဲ့ အမွဲတမျးသိမျးထားပါ့မယျလို့ ကတိပေးပါတယျနျော..” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။
ပုံလေးတှကေတော့ ဗလာဖွဈနပွေီး လိုငျးကလြို့ မမွငျရတဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ ကြျောကြျောက ပရိသတျတှကေို ဆေးအကွီး ကွီးထိုးပွီး စနောကျလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ..။ ပရိသတျတှကေို အထငျနဲ့ အမွငျလေးလှဲအောငျ လုပျကာ အပြျောကွီး ပြျောနမေယျဆိုတာ အသအေခြာပါပဲနျော ပရိသတျကွီးရေ..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးထဲကရော ဘယျသူတှမြေား ကြျောကြျောရဲ့ ဆေးထိုးပိုဈ့လေးကို မိခဲ့ကွသေးလဲ…??? ဆေးထိုးပိုဈ့လေးကို မိခဲ့တဲ့ သူတှရှေိရငျလညျး အပြျောသဘောလေးနဲ့ မှတျခကျြလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော..။
အခွီညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရဲလေး၊ ဂျိုကာတို့နဲ့အတူတူ လယ်ကွင်းပြင်ကြီးမှာ ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ဖွေးဖွေးကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာလေးကို သေချာ အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ပြီး ဖွေးဖွေးအတွက် Birthday Surprise လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Ar-T
အိမ်ထောင်ရှင်မဘဝမှာ ရင်သွေးမယူသေးပဲ ခွေးလေးတွေနဲ့သာ ပျော်ရွှင်နေသေးတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
သင်္ကြန်အပြင်မထွက်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ စိတ်မညစ်ရအောင် အားပေးစကားပြောခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်မင်းသမီးလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်